Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad Oo Ka Hadlay Sababtii Ay Uga Aamuseen Qaraarkii Masar Gaysay Jaamacada Carabta Ee Ku Aadanaa Buuxinta Biyo Xidheenka – Allsomali.net
HomeSomaliaWasiirka Arrimaha Dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad Oo Ka Hadlay Sababtii Ay Uga Aamuseen Qaraarkii Masar Gaysay Jaamacada Carabta Ee Ku Aadanaa Buuxinta Biyo Xidheenka
26 June 2020 allsomali Somalia, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Wasiirka arrimaha dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay sababta Ay Somalia uga Aamustay qaraarkii ay dalka Masar keentay ee ku aadanaa Biyo xidheenka Dalka Itoobiya ka samaynayo Wabiga Niile.
Dalalka Itloobiya, Masar iyo Sudan ayaa bilihii ugu dambeeyay isku khilafsan biyo xidheenka ay dalka Itoobiya ka samaynayo Wabiga Niil ee kala dhexeeya Masar Iyo Sudan.
wasiirka arrimaha dibadda Somalia Axmed Ciise ayaa sheegay in Itoobiya tahay dal ay daris la yihiin sidoo kale yihiin saaxiibo sidaas darteed ayna wax dhib ah la doonayn.
Wasiirka uu la hadlaya BBC-da ayaa yidhi”Anaga Mawqifkeenu waxa uu ahaa Somalia, Djibouti iyo dalka Qatar in wadahadalo lagu dhameeyo khilaafka weyn ee ka yimid biyo xidheenka ay Dalka Itoobiya dhisayso ee ka dhexeeya Dalalka Masar iyo Sudan”.
“Qaraarka Dalka Masar soo gudbiyay waxa uu sheegayay in ayna Itoobiya buuxin biyo xidheenka ilaa inta laga heshiinayo halka ay Itoobiya sheegtay in ay ogoshahay wadahadalada laakiin ay doonayso in ay buuxiso biyo xidheenka hadii aanay waxba ka soo bixin wadahadalada”.
“Waxa aan doonaynaa in aanu khilaafku ku sii badan labada dal-na si fiican wadahadalo u gaadhaan sababta oo ah dalka Itoobiya waxa aanu nahay jaar waana dal aan saaxiibnahay”.